नेपाल आज | प्रचण्ड र बाबुरामलाई बिचरा भन्न मन लाग्छ, यीनलाई सेक्सको बारेमा केही थाहै छैन (भिडियोसहित)
प्रचण्ड र बाबुरामलाई बिचरा भन्न मन लाग्छ, यीनलाई सेक्सको बारेमा केही थाहै छैन (भिडियोसहित)
बुधबार, १६ चैत २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
कृषि, राजनीति, यौन र समाजबारे मदन राई सधै विचारोत्तेजक धारणाका कारण चर्चामा हुन्छन् । उनले हालै नेपालआजसंगको कुुराकानीमा नेपाली नेताहरु र यौन, यौन र समाज आदिबारे सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता दिएका छन् । उनको अन्तर्वार्ताको सार निम्नानुशार छ ।
मेरो कुरा सुनेर केही मानिस बेखुसी भएका छन् । केही मानिस त यसले केही नबोलोस्, यसका कुरा कसैले नसुनून् भन्ने कामना गर्छन् । तर मेरो धारणालाई धेरैले मन पराए । आफूले नचाहेको मानिसको धारणा धेरैले मन पराएपछि उनीहरुले घृणा गर्छन्, सके ज्यानै मार्न खोज्छन् । सक्नेले आएर मारे हुन्छ नी ।
मलाई मृत्युसँग भय छैन । किनभन मृत्यु त निश्चित छ । म जे जस्तो तत्वहरु मिलेर बनेको छु, जहाँबाट मेरो शरिरमा विभिन्न तत्व आए ति फर्केर फेरि प्रकृतिमा जाने हो । शरिर मर्ने भन्दा पनि यसले रुप मात्रै परिवर्तन गर्ने हो । यसकारण मलाई मृत्युसँग त कुनै भय नै छैन । संसारकै सबैभन्दा ठूलो समस्या ग्लोबल वार्मिङ हो । त्यसपछि प्रदूषण, महिला हिंसा, गरिबी प्रमुख छन् ।
यो समस्याको समाधान मेरो दृष्टिबाट वैज्ञानिक छ । गाह्रो पनि छ । मेरो जे धारणा छ त्यो अहिलेका समाजले स्वीकार नगरेको विषय हो । अहिलेको समाजले त चुपचाप बस्नु, ठूला मान्छेले जे भन्छन् त्यो सत्य हो भनेर पछि लाग्नु, बहुमतले भनेको मान्नु भन्छ । बहुमतले भनेको मान्नु त पर्छ तर तत्कालकालागि मात्रै । सधै बुहमतले भनेको ठीक हुँदैन । त्यही भएर बाद, सम्वाद र प्रतिवादको जन्म भएको हो । बहुमतले मान्नु वाद हो । त्यो ठीक भएन भने गर्नुपर्ने प्रतिवाद हो । प्रतिवाद भएपछि सम्वाद हुन्छ ।
मलाई ठालू हुनु छैन । म राजनीतिमा आएको मन्त्री हुन प्रधानमन्त्री हुन अर्काको नमस्कार खानलाई होइन । मेरो चाहना यतिमात्रै हो कि यो मानवजातिले प्रकृति नष्ट नगरोस्, हामी नेपालीले अहिले सुनको थाली लिएर बालुवाको देशमा भिख माग्न जान नपरोस् भन्ने मात्रै हो ।
नेताहरुको यौन जीवन
कसैको हर्मोन बढी हुन्छ, धेरै सेक्स चाहिन्छ । कसैको हर्मोन कम हुन्छ, यौन जीवन नै हुँदैन । धेरैले यसलाई ज्यादै लुकाउँछन् । निजी विषय भएकोले लुकाउनु ठीकै पनि हो । भोक पछि गर्नै पर्ने सम्भोग हो । सम्भोगबिना त मान्छे बाँच्नै सक्दैन । राति भात खाएपछि गर्ने भनेको सम्भोग नै त हो । तर सम्भोग गर्ने उमेर चाहिन्छ ।
मान्छेले किन दाल भात मात्रै खाँदैन ? अलग अलग खाने कुरा खोज्छ । त्यसैगरी सम्भोग पनि एउटैसँग हैन फरक फरकसँग गर्न खोज्छ । गर्छ पनि । तर गरेको छैन भनेर लुकाउँछ । यो समाजमा यसरी लुकाउने त कति कति । लोग्ने मान्छे मात्रै होइन स्वास्नी मान्छेले पनि परपुरुषसँग गरि नै रहेको छ । तर भन्दैनन् । म चाहिँ भन्छु अनि मैले खप्की पनि खान्छु । सबैले परस्त्री, परपुरुषसँग गर्नु पर्छ भन्दिन । तर यसलाई धेरै लुकाएर, धेरै छोपेर समाजलाई दुःख दिनु हुँदैन । जति लुकायो, हेर्ने चाहना त्यति बढ्छ । त्यसैले अपराध जन्माउँछ । सबै कुरा खुला गरिदियो भने मान्छेमा क्युरिसिटी रहँदैन । अपराध कम हुन्छ ।
यौन शिक्षा राम्रो हुने हो भने वेश्यालय चाहिँदैन, जेल चाहिँदैन, अपराधसम्बन्धि कानुन पनि चाहिँदैन । संसारमा जहिले पनि ५० प्रतिशत महिला ५० प्रतिशत पुरुष यो दर वा यस्तै मिल्दो दरमा मान्छेको जन्म हुन्छ । सम्भोग योग्य भएपछि सबैलाई पार्टनर पुगि हाल्छ । सम्भोग गर्नको लागि मान्छे उपलब्ध भएपछि किन जानु वेश्यालय ? अब एकै पार्टनरले त पुग्दैन । त्यस्तोमा अरुको श्रीमती, अरुको श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध हुन्छ । मन मिल्यो भने त्यो अनौठो भएन । यसैले भनेको आफ्नो जीवन पार्टनर एउटा हुन्छ, सेक्स पार्टनर अरु हुन सक्छन् ।
जसको जो सँग जबसम्म मन मिल्छ सम्भोग गर्दा हुन्छ । मन नमिलेपछि छाड्ने हो । मैले मेरो जेठी श्रीमतीसँग कुरा मिलेन, छाडे । कान्छी ल्याए । उनीसँग मिलिरहेको छ । म कामको सिलसिलामा बाहिर हुन्थे । सम्भोगको चाहना हुन्थ्यो । अरुसँग गरेँ । यसमा मैले मेरो श्रीमतीलाई कसरी घात गरे ? मैले कुटेको छैन, दुःख दिएको छैन । मैले सम्भोग गर्दा उनलाई पीडा त कसरी हुने हो र ?
म दर्शनको कुरा गर्छु । यो धेरैले बुझ्दैनन् । अनि मलाई भरमार गाली गर्न थाल्छन् । गालीका लागि प्रयोग हुने सबै शब्द भन्छन् । मलाई पनि के र ? ज्यानै गए त फरक पर्दैन भनेर बसेको मान्छेलाई गालीले के गर्छ ?
नेपालमा सेक्सी नेता एक जना पनि छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा । यीनै त हुन् नेपालका नेता । राप्रपामा पनि छैनन् । मैले देख्दा कोही पनि सेक्सी छैनन् । गगन थापा पनि हैनन् । सेक्सी त बिल क्लिन्टन हुन् । नेपालका नेता त सबै चुर्से, गुन्द्रुके छन । कोही सेक्सी छैनन् ।
नेपाली नेताहरुको कुनैमा दख्खल छैन न सेक्समा न विकासमा । सधै ठूलो भइराख्ने, नमस्कार खोजी राख्ने सोचका छन् नेता । बाबुराम र प्रचण्डको कुरा गर्दा त बिचरा भन्छु । दुइटै केही पनि होइनन् । यीनीहरुलाई सेक्स भन्ने नै थाहा छैन । हुन त प्रचण्डका धेरैवटा नानीहरु छन् । तर सन्तान हुने बित्तिकै कोही पनि सेक्सी हुँदैन ।
महिला नेतृहरुमा पनि कसैलाई सेक्सी देखेको छैन । कार्यकर्ताहरुमा पनि मैले खासै पाउन सकेको छैन ।
मदन रार्इ सेक्स